Imidlinzo yePhasika | Bryanston Bible Church
Sihlanganise loluhlelo lokuzinikela njengengxenye yezintshumayelo zePhasika eziwuchungechunge esizenza kanye nohlelo lwezifundo eBandleni leZingane ne ya basha. Sijabule kakhulu ngokusebenzisana kwezinkonzo zethu zangeSonto kanye nezinkonzo zeBandla leZingane.
Njengebandla eliwumndeni, silangazelela ukuya ngokugxila emthandazweni, ekwaluseni, nasebululeni. Naloluhlelo lokuzinikela lungenye yezindlela esithemba ukwakha ngayo kulombono. Sifuna ukuthi uye ngokugxila ngokuthi ubambe izinhliziyo zethu ngevangeli, ngokufunda imibhalo kakhulu nangokugqugquzela umphakathi nangomthandazo.
Ngaphambi kokuba uqale:
Loluhlelo lokuzinikela olulandelwayo lwangeSidlo sakuSihlwa ngePhasika luwuhlelo lokuzinikela masonto wonke. Isonto ngalinye linezigaba ezine okufanele uzibandakanye kuzo.
Isigaba sokuqala : FUNDA umbhalo ongezansi (ufunde kakhulu kuzwakale uma kuwukuthi uwufunda esixukwini sabantu).
Isigaba sesibili : ZINDLA ngalombhalo owufundile nixoxisana ngemibuzo (labo benu abanezingane ezincane khethani imibuzo efakwe imibala).
Isigaba sesithathu : YENZA lesisifundo empilweni yakho kulelisonto.
Isigaba sesine: THANDAZA umthandazo owunikeziwe noma owakho.
Futhi lufaka ingqikithi yombhalo ngamunye ukusiza ezinxoxiswaneni nokuzindla ekuzinikeleni. Lokhu okwawo wonke umuntu - ikholwa elisha, ikholwa elivuthiwe, yilowo ozenzela isikhathi njalo njalo sokufunda izwi likaNkulunkulu kanye nalabo abasakuthola kunzima ukuzinikela ezwini.
Senze loluhlelo lokuzinikela ukuba lwenziwe emindenini, amaqoqo obungani, kanye nasemphakathini. Nalabo akumele ukuthi kuze kube abantu ababodwa noma abafanayo wonke amasonto. Njengoba sikugqugquzela ukuba uzibandakanye kuzo nabanye abantu, lokhu akuwona umgomo, njengoba nje kuwuhlelo lokuzinikela oluhle kakhulu nawe ngokwakho ungazuza lukhulu kulo esikhathini sakho wedwa somthandazo.
Okokugcina, sithanda ukuba sikugqugquzele ukuthi ubhale phansi noma yimiphi imicabango, imizindlo, noma ubufakazi obungavuka ngesikhathi wenza loluhlelo lokuzinikela. Lokhu kuwusizo kakhulu ekutheni ubuke emuva, kodwa futhi kuwusizo nakithi. Singathanda ukuzwa izindaba zakho ngokuthi lesisikhathi ezwini likaNkulunkulu nasemphakathini sibe yisibusiso kanjani kuwe.
Siyathandaza ukuthi loluhlelo lokuzinikela olulandelwayo lukusize.
Iqembu le BBC
Isonto lokuqala : Ukumdumisa Yena
Isonto lesibili : Uthando Olukhonzayo
Isonto lesithathu: Bumbanani
Isonto lesine : UNkulunkulu uphethe
Isonto lesihlanu: Ukuthokoza kwethu ekuvukeni kwakhe
Isonto lesithupha: UJesu usifuna njengoba sinjalo